Mooshinkii looga soo horjeedey R/Wasare Saacid oo barlamaanku laaley ka dib markii inta badan xildhibaanadii soo gudbiyey ay ka laabteen go’aankoodii hore – idalenews.com
Gudoonka baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inuu laalay mooshinkii laga keenay Xukuumada, kadib markii tiradii loogu tala galay inay mooshin ka keenaan Xukuumada uu yaraaday, isla markaana ku soo hartay tirada Xildhibaanada 38-xildhibaan, ayna ansax aheyn.
Kulanka Baarlamaanka oo ay ka soo qeyb galeen ilaa 200 xildhibaan ayaa waxaa shir gudoominayay Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof, Jawaari, waxaana uu ka dhawaajiyay in markii hore mooshinka u soo gudbiyeen 93-xildhibaan, hase ahaatee maalinba maalinta ay ka dambeysay ay xildhibaano warqado u keenayeen oo ay kaga tanaasulayeen.
“Maalinba maalinta ka dambeysa Xildhibaano ii imaanayay, waraaqado ayay i keeneen oo ay kaga laabanayeen, waxaa ugu dambeysay 13-xildhibaan, waxaa soo hartay oo kaliya 38-xildhibaan sharcina kuma ahan inay mooshin keenaan”ayuu yiri Prof. Jawaari.
Xildhibaan C/llaahi Xaaji Dayib oo ku hadlayay magaca Xildhibaanada mooshinka keenay ayaa kulanka ka sheegay inay ka tanaasuleen mooshinka, ayna ka laabteen, waxaana xildhibaanada baarlamaanka ku soo dhoweeyeen sacab.
Wararka qaar ayaa sheegaya in 38-Xildhibaan ee ku soo haray mooshinka ay ahaayeen xildhibaano taageerayay Jubaland, oo ka soo kala jeeda Jubooyinka iyo Puntland.
Kulanka baarlamaanka ayaa goor dhow soo idlaatay, waxaana mudanayaasha baarlamaanka ee ka soo horjeeday mooshinka ay ka soo dareereen xarunta golaha shacabka, iyagoo aad u faraxsanaa.
Wasaarada Arrimaha Dibada oo qorsheyneysa in ay Isbedel balaaran ku sameyso dhamaan Safaaradaheeda Dalalka shisheeye